क्यान्सरभन्दा ख’तरनाक कालो ढुसी , कस्ता मानिसलाई सं’क्रमण हुन्छ ? यसबाट बच्न के गर्ने ? – Nepal Online Khabar
साउन ३०, २०७८ शनिबार 89
काठमाडौं : को’रोना भा’इरसको सं’क्रमण फैलिएसँगै नेपालमा पनि कालो ढुसी (ब्ल्याक फंगस) अर्थात् म्युकरकाइकोसिसका बिरामीहरु फेला परे । नेपालमा हालसम्म ३५ जनाभन्दा बढीमा कालो ढुसी सं’क्रमण भएको पाइएको त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका नाक-कान-घाँटी रोग विभागका सह-प्राध्यापक डा रवीन्द्रभक्त प्रधानाङ्गको भनाइ छ ।
म्यु’करकाइकोसिस (कालाे ढुसी) मेनेजमेन्ट कमिटीका संयोजक समेत रहनुभएका डा प्रधानाङ्ग यो रोग गम्भीर प्राणघातक भएको बताउनुहुन्छ ।
क्यान्सर राे’ग समयमै उपचार पाए ठिक हुन्छ । कालाे ढुसीको भने समयमै पहिचान र उपचार नभए बिरामीले मृ’त्यु पर्खनुबाहेक अन्य विकल्प नभएको डा प्रधानाङ्ग बताउनुहुन्छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यसमा पनि क्यान्सरजस्तै ४ स्टेपको अवस्था हुन्छ । दिमागभित्र पुगेको छैन भने अप्रेशन सम्भव हुन्छ । यसले सुरुमा नाक वा नाकका वरिपरिको भागमा सं’क्रमण गर्छ र विस्तारै आसपासका अंगहरुका साथै मस्तिष्कसम्मै पुग्छ ।’
जस्तोः कालाे ढुसी आँखामा छिरेको छ भने आँखै झिक्नुपर्ने । तालुमा छिरेको भए तालु चिर्नुपर्ने । छालामा सं’क्रमण भए सबै छाला निकालेर प्लास्टिक सर्जरी गर्नुपर्ने र नाकमा सं’क्रमण भए नाकभित्रको सबै पार्ट झिकेर भ्वाङ नै पार्नुपर्ने डा. प्रधानाङ्गले बताउनुभयो । टिचिङमा २ जनाको आँखा निकालेर उपचार गरेको उहाँको भनाइ छ ।
यो रो’ग को’रोना सं’क्रमण भएर रो’ग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा कमी आएका मानिसहरुलाई लाग्ने सम्भावना बढी भएको उहाँको भनाइ छ । त्यस्तै को’रोनापछि ‘डाइभेटिज अनकन्ट्रोल’ भएका मानिसहरुले तत्काल जचाँउनु पर्ने उहाँ सुझाव दिनुहुन्छ ।
त्यस्तैगरी क्यान्सर भएका मानिसहरुलाई पनि कालो ढुसीको सं’क्रमण हुनसक्ने उहाँको भनाइ छ । विगतमा वार्षिक ३-४ जनामा देखिने यो रो’ग को’भिड आएपछि एक महिनामै २०\_२५ ओटा केस आएको डा प्रधानाङ्गले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार जब मानिसमा को’रोनापछि रो’ग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमी भयाे, यो रो’गका सं’क्रमित पनि बढे ।
छिमेकी मुलुक भारतमा भने याे राे’गको अवस्था विकराल रहेको छ । भारतको तुलनामा नेपालमा भने कालो ढुसीको सं’क्रमण कमै छ । भारतको हावापानीका कारण र त्यहाँको जनसंख्या धेरै रहेकाले पनि सं’क्रमितको संख्या पनि धेरै भएको डा प्रधानाङ्ग बताउनुहुन्छ । नेपालको पनि तराइ क्षेत्रमा यसको सं’क्रमण अलिक धेरै पाइएको उहाँकाे भनाइ छ ।
कालो ढुुसीबारे नेपालमा सं’क्रमणको अवस्था र उपचार के-कसरी भइरहेकाे छ, यसबाट सजग रहन के गर्न सकिन्छ ?
हाम्रो त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पनि गत जेष्ठ ३ गते पहिलो केस फेला पर्यो । त्यसपछि हालसम्म हामीकहाँ २० जना पुगेका छन् । यसबाहेक अन्य अस्पतालमा पनि यसको उपचार भइरहेको छ । जम्मा गरी नेपालमा यो रोगको सं’क्रमित लगभग ३५ जनाको हाराहारीमा फेला पर्नुभएको छ । सबैभन्दा बढी तराइ भेगमा फेला परेकाे छ । भारसँगको सीमा तथा मिल्दाेजुल्दाे हावापानी तराइमा हुनाले त्यहाँ बढेको हो ।
काठमाडौं उपत्यकामा भने यसको सं’क्रमण धेरै कम पाइएको छ । को’भिडकाे लक्षण भएका मानिसमा अनकन्ट्रोल हुनेगरी डाइभेटिज भएको भए, उसको नाकको वरीपरी कुनै प्रकारको समस्या आयो भने कालो ढुसी हो कि भनी शंका गर्न सकिन्छ ।
अलिक ढिला भायो र सं’क्रमण बढ्दै गयो भने आँखामा इनभल्व हुन्छ । आँखामा पुग्यो भने आँखा सुन्निने, रातो हुने, विस्तारै आँखा नचल्ने र अलिक पछि गएर आँखा चल्नै छाड्ने हुन्छ । त्यस्तैगरी नाकको वरिपरि रातो हुने, घाउ हुने, दाँत लुज हुने, दिमागतिर गयो भने मानिस अन्काउन्सियस (बेहाेस) हुने हुन्छ ।
Prevतपाईको भाग्य परिवर्तन हुने र छिट्टै धनि बन्ने यी ५ संकेतहरु जान्नु-होस् !
Nextमौसमविदहरुको आग्रह :– ‘नदीनाला बढ्न सक्छ सचेत रहनु’